सङ्गीत आयाम, (कल्यानपुर,भरतपुर)
निबन्ध<?xml:namespace prefix = o />
जीवनमा आगमन हुने अनगिन्ती रङ्गहरुमा सधैँ मौसम एकैनासको नहुनु अस्वाभाविक छैन । परिवर्तन त ऋतु आगमनको सङ्केतमात्र होइन ऋतु बिदाइको संयोग पनि हो । रिमझिम रिमझिम बर्षाद्मा पानीसँग संवाद गर्दाको पललाई कुनै सुन्दर स्वप्न देखेजस्तै रुपमा आकर्षित हुन सकिन्छ भने हिउँदको कठ्याङ्गि्रँदो जाडोमा सबैलाई रापिलो घामको चाह हुन्छ नै म पनि कुनै अपवाद होइन ।
कविता अर्थात् काव्यमा विशिष्ट शक्ति छ भनेर समालोचकले भनेको कुरालाई नै अनुशरण गरेर अघि बढ्नु पर्दछ भन्ने हुँदैन राम्रो कविता आफैं बोल्छ र कविताले मस्तिष्करुपी तन्तुमा मात्र होइन हृदयरुपी सागरमा पनि सक्दो हस्तक्षेप गर्न छोड्दैन । हजारौं वर्षमा दार्शनिकहरुले धेरै कुरा भनेर गए सायद भन्न बाँकी केही पनि भएको देखिँदैन तर कहिल्यै समाप्त भएको हुँदैन सार्वजनिक नभएका कुराहरु । ओझेलमा परेका कुरामाथि पनि एकदिन उज्यालोको प्रतिविम्ब अवश्य नै पर्नेछ यस्तो विश्वस्तताको पनि आफ्नै प्रकारको भूमिका हुनुपर्छ । जीवनका विविध रङ्गहरुलाई समयमैं महसुस गर्न सकिएन भने जीवनको उदासीनतामात्र प्रकट हुन्छ । जीवन वैचारिक पुाजभन्दा बढी नयाँ नयाँ रङ्गहरुलाई समायोजन गर्ने सन्दर्भमा अनुभूतिजन्य छ । जीवनको उदय नै सर्वोपरि सत्ता हो । सायद यसैबाट निकै अभिप्रेरित भएर होला म आजभोलि दार्शनिकताको खोजीभन्दा बढी भावनात्मक हुने कोसिसमा जुटिरहेछु ।
दार्शनिकहरुले विचारको मृत्युको घोषणा धेरै पहिला नै गरेका हुन् तर अचम्म लाग्छ न उनीहरुले कहिल्यै मृत हुने विचारमाथि काम गर्न नै छोडे न विचारलाई अस्तित्वबाट पर राख्दै आफ्नो महत्वाकाङ्क्षालाई अघि बढाउन नै छोडे ।
दार्शनिकहरुको अवसर पाएसम्म भन्ने बानी नै हुन्छ अर्थात् उनीहरुको खेती नै त्यही हो । उनीहरु के के भन्दछन् त्यतातिर नजाउष । महसुस गरेर आत्मसात हुने कुरालाई पनि दर्शनको गरुङ्गो भारी बोकाउँदै वैचारिक श्रेष्ठता प्रमाणित गर्न खोज्नु र त्यसलाई उच्चदार्शनिकताको स्वरुपमा ग्रहण गरिनु त्यत्तिकै घातक पनि देखिन्छ । यस्तो प्रकि्रयाले अर्को कुनै नयाँ दर्शनलाई नै उत्पादन गर्ने काम पनि गर्ने गर्छ ।
यसअर्थमा हेर्दा दार्शनिकहरु पनि राजनीतिक तानाशाहकै विस्तृत संस्करण हुन् भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । जहाँ बलजफ्ती आफ्ना कुराहरु निर्माण गरेर त्यसलाई लागू गराउन जोर जबर्जस्तीको बाटो लिइन्छ त्यो प्रकि्रया मानवीयताको विरुद्धमा चालिएको कदम पनि हो जसलाई ज्यादतीको अर्थपूर्ण नमुनाको रुपमा प्रस्तुत गर्न नसकिने होइन ।
वैचारिकता र दार्शनिकताको खोजी गर्दै मेरा धेरै वर्षहरु बितेको मेरो स्मरणमा अझै पनि सुरक्षित छ । भोक प्यास त्यागेर विशिष्ट बन्ने लोभमा जीवनका अमूल्य समयरुपी घोडाहरुमा सवार म परिवार र समाजलाई बोझ बन्दै गरेको दृश्य भने कम पीडादायक पनि थिएन । हुन त मान्छे स्वयं टिप्पणीको महापात्र पनि हो टिप्पणी गर्ने र गराउने खेलमा मग्न । जे गर्दा पनि टिप्पणी हुनु समाजको प्रकृतिअनुसार अस्वाभाविक पनि छैन । टिप्पणीको एकनासको प्रहारबाट अर्को कुनै विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आएपछि जीवन सोचेको जस्तो हुँदैन पनि ।
सोचेभन्दा केही फरक कि्रयाकलाप घटित भएको देखियो भने त्यसलाई मान्छेहरुले अनेक प्रकारका नाम दिएर परिभाषित गर्ने गर्छन्- कति पाच्य हुन्छन् त कति अपाच्य । कोही यसलाई पागलपनको प्रदर्शन भन्छन् त कोही अव्यहारिकपनको पराकाष्ठा । जे जस्तो भने पनि मान्छे बाचुाजेल अनभूतिजन्य कि्रयाकलापमा सकि्रय हुन्छ नै । विचारमा प्राप्त आनन्दभन्दा अनुभूतिमा प्राप्त आनन्द शक्तिशालीमात्र हुँदैन अझ सुन्दरताले ओतप्रोत पनि हुन्छ ।
दार्शनिकताको खोजी गर्दा पनि टिप्पणीहरुको महाभारतले आक्रमण गर्न नछोडेको र अनुभूतिगतरुपमा यात्रारत रहँदा पनि टिप्पणीहरुको रामायणले प्रहार गरेपछि म सामाजिक प्रकारले कुनै गुलामको स्वरुपमा आफूलाई अनुवादित गर्नुपर्ने स्थिति आयो जुन मलाई कतै माजुर थिएन । जीवन त आफूले बाँच्ने हो अरुले होइन । जीवनका तमाम पीडा र सुखहरु स्वयंले महसुस गर्न सकेन भने अरुद्वारा निर्देशित जीवन त्यति नै कहालीलाग्दो छ जति सामुदि्रक आँधीमा परी गन्तव्य छुट्दै गएको कुनै जहाजको अवस्था ।
वैचारिक यात्रा गर्दा गर्दै छिया छिया भएको मेरो मस्तिष्कलाई आराम दिनु अतिआवश्यक थियो नत्र परिवारमा कुनै प्रलयको आगमन स्वाभाविक हुन्थ्यो । ममा अनुभूतिजन्य चरित्र हाबी हुँदै गएपछि त्यसले स्वयं नै आफ्नो गन्तव्य पनि पहिल्याउँदै गयो । जीवनलाई मुलायमरुपमा निर्माण गर्ने हो भने त्यसलाई स्वप्नवत् तरिकाले छोड्नुपर्छ भन्ने बलशाली विचारमा आरोहित भएर म अक्सर यत्रतत्र छरिने गर्दछु । सायद यसैअन्तर्गत आफूलाई कहिले कहाँ कहिले कहाँ डोर् याएर परिचालित गर्ने अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै गएको छु आजभोलि । घटनाहरुको कमी भने छैन यस संसारमा प्रायः दुर्घटनाहरुले तिनलाई निम्त्याइरहकै हुन्छन् ।
अनुभूतिको महायात्रा तय गर्दै यतिखेर म कुनै आकर्षक बगैंचाभित्र प्रवेश गर्न पुगेको छु । म अहिले विचार र गरुङ्गा चिन्तनहरुभन्दा परमात्र छैन अझ शान्ति र एकान्तताको आलिङ्गनभित्र आबद्ध पनि छु । अनेक प्रकारका रङ्गीन फूलहरु फुलेका छन् मेरासामु वास्नामय सुगन्धमा भर्खरै कामबाट थकित हुँदै फर्केको अर्थात् आफ्नो उत्तरदायित्व निभाएर एकछिनको लागि भए पनि अनगिन्ती स्वादहरु खोज्न अग्रसर भएको म- आफ्नो दिनभरिको थकाइलाई मेट्ने कोसिसमा जुटेको छु । धेरैको सोचाइमा यो पागलपन हो त अझ कतिपयको विचारमा अव्यवहारिकपन । अनुभूतिको महायात्रा तय गर्नेले कहिल्यै सोच्दैन कि दुनियाँ उसलाई कसरी हेर्छ ! अनुभूतिको लागि नै जीवनरुपी लडाइँ लड्नेलाई कसले के भन्छ त्यसको कुनै सरोकार हुँदैन पनि । अनुभूतिजन्य कि्रयाकलाप अवैध भएको सार्वजनिकरुपमा घोषणा हुने गरिए पनि अनुभूतिको डुङ्गामा सवार व्यक्तिलाई दण्ड दिने विधान भने अहिलेसम्म बनेको छैन ।
कहिलेकाहीँ त लाग्छ निकै व्यवहारिक हुन मन पराउनेहरुले केही न केही त अनुभूत गर्नुपर्ने हो ! कतै न कतै भावनात्मक सम्बन्धलाई विस्तार पनि गर्नुपर्ने हो ! अद्भुत यात्रामय क्षण आनन्दको उद्गमस्थलसँगै स्मरणशक्तिको विकासक्रममा प्रभावकारीसमेत बन्दछ । दुई चारदिनको जिन्दगीमा अरु कुराहरुजस्तै अनुभूतिजन्य कि्रयाकलापमा पनि जीवन प्रफुल्ल भएर हाँस्न सक्छ भने त्यो विनाकारण घटित भएको हुँदैन भनेर वर्तमान महापण्डितहरुले कहिले अनुभव गर्छन् होला !
साँच्चै भन्ने हो भने यतिखेर म दर्शनको भारी बोकेर आफैलाई दुःख दिने पक्षमा छैन बरु अनुभवको सङ्ग्रह गर्ने अभियानमा सङ्लग्न रहेको छु । जीवन विचारले मात्र परिपूर्ण हुँदैन भावुकतापूर्ण अनुरागको साजालले पनि निर्मित भएको हुन्छ । जीवन चिन्तनीय अभिप्रेरणाहरुको समष्टिमात्र होइन मनलाई फराकिलो बनाएर स्वच्छन्दतालाई प्रयोग गर्नु र त्यसको उडानमा प्रयोगशील हुनु पनि हो । काम गर्दा गर्दै थाकेपछि कुनै श्रमिकले एकछिन भए पनि चौतारीमा आराम गरेको क्षणमा जति प्राकृतिकता भेटिन्छ त्योभन्दा कम छैन कल्पनाशील अवस्थामा महायात्रातिर प्रस्थान गर्नु पनि । विश्वका कुनै पनि समृद्ध मुलुकमा स्वतन्त्रताको भरपूर उपभोग गर्नुलाई पागलपन भनेर लािाछत गरिँदैन पनि ।
यातनाशिविरमा दुर्घटित भईरहने जीवनका बारेमा पटक पटक महाभारतहरु नलेखिएका होइनन् । अझ कयौं रामायणहरुले त दुःखका गीतभन्दा अरु गाउन पनि जान्दैनन् । जीवनमा पीडाहरुको आगमन यस्तो रुपमा हुन्छ मान्छे कि त समाप्त हुन्छ कि त उठ्नै नसक्ने गरी पक्षाघातको फेला पर्छ । यातनाहरुलाई हार्दिकतापूर्वक नलिने हो भने जीवन िहंड्ने बाटो कहिल्यै सुखद हुँदैन पनि । व्यथाहरुको कथा बोकी एकनासले गीत गुनगुनाउँदैमा त्यसको जलन कम भएको कतै इतिहास लेखिएको पनि छैन । जीवनमा प्रायः सुखको खोजी धेरैले भौतिकरुपमा मात्र गरेका देखिन्छन् ।
एक्लै एक्लै जीवनका तमाम सन्दर्भहरु इतिहास भएर आँखा अगडि आउँछन् जसमा एक पलकमै संसार चियाउने सामथ्र्य छ । मौसम निरन्तर झरिरहेछ त्यसलाई पिउने शक्तिको आश्चर्यजनक छटा भने मस्तिष्कभरि छरिएको हुन्छ मात्र त्यसको पहिचान गरेर उपयोग गर्न जान्नुपर्छ । कति शान्त हुन्थ्यो होला मस्तिष्क आफूले गर्ने काम पनि आनन्दकै अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा भैदिए ! कति उद्वेलित हुन्थ्यो होला जीवनयात्रा प्रायः आफू िहंड्ने बाटोले पनि जीवनानन्दकै खोजी गरिदिए !
फूल छ र म छु पात छ र मभित्र अनुभूति छ । सुगन्ध छ र त कवितात्मक लय छ नत्र अतिरिक्ति वासनामय संसारमा केवल दोैडधूप र व्यस्ततामात्र जीवनको लय हुन के बेर ! एकान्तको सुसेली पनि कहिलेकाहीँ रमाइलो बनिदिने गर्दछ । आफैंमा त्यसको जयजयकार गर्नु मीठो पनि लाग्दछ । पुस्तकका सुन्दर हरफहरुले सधैँ नै जीवनको राग गुन्गुनाएझैं लाग्छ । रङ्गिलो क्यानभास पनि मान्छेको शालीन उपस्थितिमा मुसुक्क मुस्कुराएझैं लाग्छ । कुनै पत्रकारले समाचारलाई निकै सटीक बनाएर प्रस्तुत गर्छ त्यो सटीकता नै उसको जीवन बाँच्ने कला बन्न पुग्छ । अझ मुक्ति त सटीकताभन्दा धेरै पर छ जीवनानन्दले अतिरिक्त उन्मुक्तताको खोजी पनि गर्छ । पुनरावृत्ति वास्तवमा मृत्युबोधको उद्घोष पनि हो ।
खास सन्दर्भमा प्रेमी हुन मन पराउनुले प्रेमकै यात्रा तय गर्ने गर्छ । खास अर्थमा कुनै विषयवस्तुप्रति आत्मीयता दर्शाउनुले जीवनमा साङ्गीतिकता नै थप्दछ । बाध्यता र विवशताले जर्जर पारेका असङ्ख्य संवेदनाहरुलाई झक्झक्याएर त्यसमा जीवनरस घोल्दाको आनन्द वर्णनातीत छ । पीडा र यातना पिएर क्षतविक्षत हुने मस्तिष्कहरुमा खुसीयालीको बीउ छर्दा प्राप्त हुने हार्दिकता कल्पनातीत छ । म चाहन्छु जीवन जे जति छ त्यतिमात्रै भएर सीमित नहोस्; अझै फैलिएर त्यो भू-भाग कटोस् जहाँ ठूला ठूला विश्लेषणहरुको होइन महसुस गर्ने सशक्त माध्यमका रुपमा त्यो प्रक्रिया परिभाषित होस् । म चाहन्छु जीवनमा छरिएका अनन्त श्रृङ्खलाहरुको बेजोड यात्रा बनोस् जसमा आनन्दित भविष्य परिलक्षित होस् । जीवन वास्तवमा जीवनजस्तै बनोस् । जीवन यथार्थमा जीवननान्द होस् ।
सङ्गीतजी निबन्ध त मीठो लाग्यो है । जीवनलाई बँचाउने निबन्ध छ यो ।
nice piece of creation! keep it up!